Daraawiish - Wikipedia
Boqorka/Garaad: Diiriye Guure
Wadaadka: Sayid Maxamed Cabdille Xasan
Abbaanduule: Ismaaciil Mire
1897- 1920 (Jannaayo)
Hoos taga: Taleex, Boocame, Mirashi, Eyl, Webi Shabeelle iyo Beledweyne
Dhaqdhaqaaqa Daraawiishtu wuxuu dareenkooda kiciyey inta u dhexaysa 5,000 ilaa 6,000 oo ahaa dhallinyaro ka soo kala jeeda qabaa'illo kala duwan intii u dhexaysey sannadihii 1899 iyo 1900. hub ayey qaateen ka dibna waxay weerar ku bilaabeen ciidanka Itoobiya ee gobolka Jigjiga. Ciidamada Itoobiyaanka waa laga guulaystay sidaasna Daraawiish ayaa ku heshay guushoodii ugu horreysey. Hoggaamiyeyaasha Daraawiishtu waxay markaa ku dhawaaqeen in gumaysiga Ingriisku uu yihiin cadowgooda. Si loo soo afjaro dhaqdhaqaaqooda Ingiriisku wuxuu adeegsaday istiraatiijiyad qaybsanaan iyo xukun ah wuxuu raadiyey qabaa'illada degaanka ee aan Daraawiish ku qanacsanayn inay noqdaan shuraako isbahaysi oo ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa. Ingiriisku wuxuu siiyay qabaa'ilka hub iyo sahay, wuxuu ku kiciyey dagaal beeleed dhex mara. Ingiriiska ayaa sidoo kale bilaabay weerarro toos ah intii u dhaxeysay 1900 iyo 1904 si meesha looga saaro ciidammadii Daraawiishta.
Dhaqdhaqaaqa ‘Daraawiish’ wuxuu si ku meel gaar ah u abuuray qaabka reer Darwiish, oo ah "nidaamka maamul-wanaagga" horraantii qarnigii 20aad kaasoo leh xuduudo qoqob ah iyo isbeddelka dadka. Wuxuu ahaa mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii ugu dhiigga badnaa uguna dheeraa ee malleeshiyo (koox is-abaabusha) oo ka dagaallamaha Saxaraha Hoose ee Afrika muddadii gumeysiga. Wuxuu ahaa dagaal u dhexeeya dhinacyo kala duwan - gaar ahaan, waxaa isaga soo horjeeday Daraawiish oo dhinac ah, Ingiriiska iyo qabaa'ilka qaarkiis. tobannaan sano ayaa lagu laayey ku dhowaad ​​seddex meelood meel dadka dega Woqooyiga Soomaaliya, waxaa burburay dhaqaalihii (mood iyo nool).
Aqoonyahannada ayaa siyaabo kala duwan u turjuma soo bixitaankii iyo dumintii dhaqdhaqaaqii mintidka ahaa ee Daraawiish ee beesha reer Darwiish. Qaarkood waxay u tixgeliyaan fekerka "Suufi Islaami”, kuwa kale waxay ku tixgeliyaan xiisad dhaqaale oo ku kacday qaab nololeedka reer-guuraaga "saadaalinta gumeysiga": (inuu hantidooda ka qaadanayo), fekerkaa ayaa kiciyey dhaqdhaqaaqa Daraawiishta, halka taariikhyahannada casriga ahi ay sheegeen in diinta iyo wadaninimadu ay abuureen dhaqdhaqaaqa Dasoraawiishta.
Dhaxalkii Soomaalida ee Daraawiishta:
Sida ay dad badani qabaan wuxuu ahaa dhaqdhaqaaqii ugu muhiimsanaa ee qarnigii 20aad kaasoo lagu tilmaami karo “soo noolaynta Islaamka”. Qaarkood waxay Sayid Maxamed ku tixgeliyaan inuu yahay aasaasaha waddaniyadda casriga ah ee Soomaaliya, qaar kalena waxay u arkaan Daraawiishta iyo hoggaamiyehoodu inay iyaku bilaabeen qalalaasaha, dilka iyo boobka diinta ku salaysan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Daraawiish&oldid=216068"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Sebteembar 2021, marka ee eheed 04:49.